Ifilosofi yeNyaniso, Ulwazi kunye nokukholelwa
I-Epistemology uphando malunga nolwazi ngokwalo. Ukufunda i-epistemology kugxile kwiindlela zethu zokufumana ulwazi kunye nendlela esinokuhlula ngayo phakathi kwenyaniso nobuxoki. I-epistemology yanamhlanje ibandakanya impikiswano phakathi kweengcamango kunye nokunyaniseka . Ngokweengqiqo, ulwazi lufunyenwe ngokusebenzisa ukuqiqa, ngelixa i-empiricism yolwazi olufumene ngamava.
Kutheni i-Epistemology ibalulekile?
I-epistemology ibalulekile kuba ibalulekileyo kwindlela esicinga ngayo. Ngaphandle kwendlela yokuqonda indlela esizuza ngayo ulwazi, indlela esincike ngayo kwiingqondo zethu, nendlela esiyihlakulela ngayo iingcamango ezingqondweni zethu. Asikho indlela ehambelanayo yokucinga kwethu. I-epistemology ephilileyo iyimfuneko yokuba kukho ukucinga okucokisekileyo nokuqiqa-ngako kutheni uninzi lweencwadi zefilosofi lunokubandakanya iingxoxo ezibonakalayo ezinzulu malunga nolwazi lwesimo.
Kutheni i-Epistemology ibangela ukukholelwa kuThixo?
Zininzi iingxabano phakathi kwabantu abangakholelwa kuThixo kunye neengqungquthela ezixhomekeke kwimibandela ebalulekileyo abantu abangaziwayo okanye abangazange bajikeleze ukuxoxa. Zininzi zezi zizinto zengqondo: ngokungavumelaniyo malunga nokuba kunengqiqo ukukholelwa kwimimangaliso , ukwamkela isityhilelo kunye nezibhalo njengegunya, kunye nokunye, abangakholelwa kuThixo kunye neengqungquthela ekugqibeleni abavumelani nemigaqo epistemological.
Ngaphandle kokuqonda oku kunye nokuqonda izikhundla ezahlukahlukeneyo zeepistemological, abantu baya kuphelisa ukuthetha bengaphaya.
Epistemology, Inyaniso, kunye Nesizathu Sokuba Sikholwe Yintoni Esiyakholelwayo
Ama-atheists and theists ahluke kwizinto abakholelwayo: ama-theists akholelwa kwindlela ethile, abangakholelwa kuThixo. Nangona izizathu zabo zokukholelwa okanye ukungakholwa zihluka, kubonakala ukuba abantu abakholelwa kuThixo kunye neengqungquthela ukuba bahluke kwizinto abacinga ukuba ziyimigaqo efanelekileyo yenyaniso, ngoko ke, imigaqo efanelekileyo yeenkolelo ezinengqiqo.
Iingcali zihlala zixhomekeka kwiinkqubo ezifana nesithethe, isiko, isityhilelo, ukholo, kunye ne-intuition. Abantu abaqhelekileyo bayakulahla le miqobo ukuze bafumane inkcazelo, ukuhambelana kunye nokuvumelana. Ngaphandle kokuxoxa ngezi ndlela ezahlukeneyo, iingxoxo malunga nento ekholelwayo akunakwenzeka ukuba zihambe kakhulu.
Imibuzo ebuzwa kwi-Epistemology
Sinokukwazi njani oko?
Kutheni siyazi ezinye izinto, kodwa kungekhona abanye?
Sifumana njani ulwazi?
Ngaba ulwazi lunokwenzeka?
Ngaba ulwazi luqinisekile?
Kutheni sikholelwa amatyala athile kwaye kungekhona abanye?
Iimibhalo ezibalulekileyo kwi-Epistemology
Ukucamngca , ngoRene Descartes
Ukunyangwa koMntu , ngoDavid Hume
I-Critique yeSizathu esilungileyo , ngo
Inqaku ngokuphathelele ukuqonda kwabantu , nguJohn Locke
Yintoni eyahlukileyo phakathi kobuNkokeli kunye nokuQinisekisa?
Ngokutsho kobugqwetha, sinokukwazi kuphela izinto emva kokuba sibe namava afanelekileyo - oku kubhalwe ngolwazi lwangaphambili ngenxa yokuba i-posteriori ithetha "emva." Ngokomgaqo-siseko, kunokwenzeka ukwazi izinto ngaphambi kokuba sibe namava - oku kwaziwa ulwazi olusisiseko sokuqala okokuqala.
Ukuguquka kwemimoya kunye nokulinganisa kuqhelise onke amathuba-nokuba ulwazi lunokufunyanwa kuphela emva kovava okanye kunokwenzeka ukufumana ubuncinane ulwazi oluthile phambi kwamava.
Akukho zikhetho zintathu apha (ngaphandle, mhlawumbi, ngenxa yokungaqiniseki ukuba akukho nolwazi olunokwenzeka nantoni), ngoko ke wonke umntu unengqondo okanye u-empiricist xa kuziwa kwingcamango yabo yolwazi.
Abakholelwa kuThixo bavame ukuba ngababodwa okanye ngokuyinhloko abakhombisi-mbumbulu: baqinisekisa ukuba amabango enyaniso ahamba kunye nobungqina obucacileyo nolungqiqayo obunokufundiswa kunye nokuvavanywa. Iingcali zivame ukuba zikulungele ukwamkela ingqiqo, ekukholelwa ukuba "inyaniso" ingafumaneka kwiimbulo, inkolelo, ukholo, njl. Lo mdahluko kwizikhundla uhambelana nendlela abantu abangakholelwa kuThixo abanokubeka ububaluleka kubomi benkalo baze bathi indalo iyinto ebonakalayo kwindalo kodwa iinqununu zivame ukubeka ubunzima ekukholeni kwengqondo (ngokukodwa: ingqondo kaThixo) kwaye ichaza ukuba ubukho bukhona ngokomoya nangokwemvelo.
Ukulinganisa akuyiyo indawo efanayo. Abanye abanengqiqo bayakuthi nje ezinye iinyaniso malunga nokunyaniseka zingabonakaliswa ngesizathu esicacileyo nangengcamango (imizekelo ibandakanya iinyaniso zeemathematika, i-geometry kunye namaxesha amasiko) ngelixa ezinye iinyaniso zifuna amava. Ezinye izazingcali ziza kuqhubeka zize zithi zonke iinyani malunga nenyaniso kufuneka zithengwe ngenye indlela ngenxa yesizathu, ngokuqhelekileyo ngenxa yokuba izitho zethu zengqondo azikwazi ukuhlangabezana namaqiniso ngaphandle kweyona nto.
Ngokweminye icala, u- Empiricism , ufana ngokufanayo ukuba uphika ukuba nayiphi na indlela yokwenza izinto ezinengqiqo iyinyaniso okanye inokwenzeka. Abaphehli bemimoya abanokungavumelani nokokuba sifumana njani ulwazi ngolwazi kunye nawaphi amava ethu asinika ithuba lokufikelela ngaphandle kweyona nyaniso; nangona kunjalo, bonke bayavuma ukuba ulwazi malunga nenyaniso ludinga amava kunye nokusebenzisana nenyaniso.
I-Hogan's Alley: Into Eyiyo, Kuphi Eyiyo, Kutheni Ebizwa Ngaloo
I-Anfangen (Ukuqalisa) Iingcamango zesiLwimi zesiJamani
Juz '1 yeQuran
I-GolfPlay Golf: Ifomathi Entsha Ithembisa i-Excitment Eninzi ngexesha elincinane
Xelela u-Asmar Ukutyunjwa kwee-Iraq kunye noothixokazi base-Iraq